निर्वाचनका बेला प्रतिवद्धता गरेका कामहरु पुरा गर्न सफल भएको छु- अध्यक्ष शाक्यसँगको कुराकानी – BikashNews
निर्वाचनका बेला प्रतिवद्धता गरेका कामहरु पुरा गर्न सफल भएको छु- अध्यक्ष शाक्यसँगको कुराकानी
२०७७ फागुन ७ गते १८:३३ विकासन्युज
नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङ जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर गाँउपालिका हो ‘नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका’ । ५ ओटा वडाहरु रहेको यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिकरुपले फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ ।
वाइवा राजाको नामबाट चिनिएको डबजोङ दरबारको नाम र मार्पाकको बेसी हुँदै बगेको नेत्रावती खोलाको नामलाई जोडेर यस गाउँपालिकाको नाम नेत्रावती डबजोङ जुराइएको हो । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा नुवाकोटको मेघाङ गाउँपालिका, पच्चिममा त्रिपुरासुन्दरी र गंगा जमुना गाउँपालिका, उत्तरमा खनियाबास गाउँपालिका र दक्षिणमा निलामण्ड नगरपालिका सम्म फैलिएको छ ।
यस गाउँपालिका भित्र धार्मिक महत्वका क्षेत्रहरु जस्तै विन्दुकेशर महादेवस्थान कुण्डला देवी मन्दिर, बाराही मन्दिर र दोश्रो नवबुद्ध क्षेत्र वकाराहा रहेका छन् ।
गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के कस्ता छन् ? जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन्, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कसरी भूमिका खेलेको छ भन्नेलगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्ग कुमार शाक्यसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुुत छ उक्त कुराकानीको अंश ।
गाउँपालिकामा कोरोनाले पुर्याएको असर तथा हाल त्यहाँको अवस्थाका वारेमा पनि छोटकरीमा बताइदिनुस् न
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले हाम्रो गाउँपालिकामा पनि नराम्रो असर पुर्यायो । सो कालमा हामीले गाउँपालिकाका सबै वडाको विद्यालयमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेका थियौं । एउटै विद्यालयमा ६० जनासम्म बस्न सक्ने क्वारेन्टिन निर्माण गरेका थियौं । शिक्षाका साथै विकास निर्माणका कामहरु पनि त्यो वेला प्रभावित भएका थिए । अहिले भने गाउँपालिकाको अवस्था सामान्य भइसकेको छ । सर्वसाधारणहरु पनि त्रासरहित भएर आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ?
हामीले कृषि विकासका क्षेत्रमा धेरै नै काम गर्दै आइरहेका छौं । कृषि विकासकै लागि भनेर हामीले ‘एक घर एक टनेल’ को पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले गाउँपालिकामा कृषि कार्यक्रम पनि राख्दै आएका छौं । समय समयमा कृषकहरुलाई कृषि तालिम पनि दिने गरेका छौं । कतिपय कृषकहरु पशुपालन पनि गरिरहनुभएको छ । पशुपालन सम्बन्धी पनि हामीले केही कार्यक्रमहरु राखेका छौं ।
पकेट क्षेत्र छुट्याइएको छ भने त्यसमा फरकफरक तरकारीहरुको उत्पादन हुने गरेको छ । उन्नत जातको बाख्रा पनि हामीे वितरण गर्दै आईरहेका छौं । कृषि विकासका लागि भनेर वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाको तर्फबाट फलफुल र तरकारीको विउ निःशुल्क रुपमा वितरण पनि गर्ने गरेका छौं ।
गाउँपालिकामा ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के रहेका छन् होला ?
हाम्रो गाउँपालिकामा १५ सय बेडको अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा सो अस्पतालको निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाको भवन बनिरहेको छ भने ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेटमा वडा भवनको निर्माण हुन लागेको छ । यसका साथै स्वास्थ्य भवनहरु चाहिँ कतै निर्माण हुने क्रममा छने भने कतै निर्माण भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, सडक निर्माणका कामलाई पनि तिव्रता दिएका छौं । २ करोड रुपैयाँ बराबरका सडक निर्माणका कामहरु यहाँ धेरै छन् । पालिका भित्र २ करोड रुपैयाँसम्मको खानेपानी योजनाहरु चलिरहेको छ । ठाउँठाउँमा विद्यालय भवनहरु निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
गाउँपालिकामा विकास निर्माणको कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ?
प्रभावकारी नै भएको छ भन्नुपर्छ । हामीले ‘एक घर एक धारा’ अभियान पनि चलाएका छौं । यो वर्ष गाउँपालिका भित्रका ३ हजार घरधुरीमा खानेपानी पुग्ने छ । विकासका कामहरु सोचेझैं भएकोले होला जनताहरु पनि मसँग खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ ।
तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाँउपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् ?
पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै परिर्वतन आएको छ । म निर्वाचित हुनु अगाडि गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा सडक पुगेको थिएन । अहिले गाउँपालिकामा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ ।
पहिला खोलामा झोलुङ्गे पुल पनि नरहेको अवस्था थियो भने हाल झेलुङ्गो पूलको स्थापना भएको छ । खानेपानीको राम्रो व्यावस्था भएको छ । टनेल खेतीको व्यवस्था मिलाएका छौं । सिँचाईको काम पनि हामीले गरेका छौं । बाख्रा पकेट क्षेत्र पनि छुट्याएका छौं । अपाङ्ग नागरीकहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिई रहेका छौं । विकास निर्माणको काम पनि धेरै गरेका छौं । विद्यालय भवन निर्माण भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षातर्फ ध्यान दिएका छौं । मठ, मन्दिर अनि गुम्बाको निर्माण गरेका छौं ।
गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ?
हामीले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु राखेका छौं । हातमा सिप भएका युवालाई सहकारीसँग समन्वय गरेर ऋणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदी कुनै युवा केही गर्न चाहन्छ भने गाउँपालिकाको तर्फबाट १ लाख रुपैयाँ र सहकारीबाट १ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २ लाख रुपैयाँ ऋण पाउन सक्छ । अदक्ष कामदारको लागि श्रम बैंकको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले श्रमदानमार्फत युवाहरुलाई रोजगारी पनि दिने गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि गाउँपालिकामा रहेको छ । सो कार्यक्रममा छनोट भएका युवालाई हामीले रोजगारी पनि दिने गरेका छौं । केही समय अगाडि ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता भनेर पनि हामीले कार्यक्रम चलाएका थियौं । त्यसैगरी, विकास निर्माणको काममा लगाएर भएपनि रोजगारको सृजना गरेका छौं । बागमती प्रदेशले सवलोनको व्यवस्था गरेको छ । उत्पादनमा काम गर्ने समुहलाई ऋण चाहिएमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा विना धितो ५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने र यदी व्यक्तिगत रुपमा ऋण चाहिएको छ भने चाहिँ धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ?
हामीले गाउँपालिका भित्रका पर्यटन क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसारमा राम्रो ध्यान दिएका छौं । एसै त हाम्रो गाउँपालिकाले पर्यटन तर्फ प्रचूर सम्भावना बोकेको छ । पर्यटन क्षेत्रका रुपमा यहाँ डबजोङ दरबार रहेको छ । यसको संरक्षण गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट आएको छ । विन्दुकेशर महादेव भएको स्थानमा चैत महिना भरी मेला पनि लाग्ने गरेको छ । पिक्निक स्पटहरु पनि टन्नै छन् । सेमजोङ भन्ने ठाउँ पूर्वको ईलामजस्तै सुन्दर र रमणीय छ । नव बुद्ध क्षेत्र पनि आकर्षणको केन्द्रका रुपमा रहेको छ । हामीले पर्यटन पुर्वाधारको विकास पनि गरिरहेका छौं ।
शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ ?
गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका लागि धेरै काम गर्दै आएको छ । यहाँका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा पक्की भवन निर्माण भएको छ । विद्यालयमा खानेपानीको तथा लाइब्रेरीको व्यावस्था मिलाएका छौं भने यसका अलावा माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरेका छौं । विज्ञान प्रयोगसालाको व्यवस्थापन गरका छौं । गाउँपालिकाका विद्यालयहरुमा १–१ ओटा स्मार्ट टीभी वितरण गरेका छौं । विद्यालयलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट स्मार्ट बोर्ड पनि दिने कुरा भइरहेको छ । शिक्षकहरुलाई बेला बेलामा तालिम दिने गरेका छौं ।
तपाईंको पालिकामा सवैभन्दा ठुलो उद्योग वा व्यापारीक कम्पनी कुन हो ?
ठुलो उद्योग त हाम्रो गाउँपालिकामा छैन भन्दा पनि हुन्छ । बरु कृषि उद्योग चाहीँ धेरै संख्यामा छन् । गाउँपालिका भित्र मझौला उद्योग पनि सञ्चालन भएको छ । कृषकहरुले कुखुरा पाल्ने, भैँसी पाल्ने लगायत गर्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकामा हाल कस्तो योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ?
हामीले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई नै अगाडी सारेका छौं । युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु पनि प्राथमिकतामा छ । विद्युत विस्तार कार्य सबै वडामा पुर्याउनुपर्छ भनेर जोड गरेका छौं । जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई पनि अगाडी सारेका छौं । सडकको विकासका लागि पनि हामीले जोड दिएका छौं । यसका साथै कृषि, सिँचाई तथा विद्यालयको पूर्वाधार लगायतका कामलाई पनि प्रथामिकतामै राखेका छौं ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनु भएको छ ?
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच राम्रो समन्वय भएको छ । स्थानीय तहमा ठुलो बजेटमा विकास निर्माण गर्नुपरेको अवस्थामा डीपीआर गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाउने गरेका छौं । विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले सोचे अनुसारको नै बजेट तथा योजनाहरु आईरहेको छ ।
स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आइपर्छन् नि ?
स्थानीय तहमा काम गर्दा सामान्य किसिमका समस्याहरु देखा पर्ने गर्दछन् । केही समय अगाडी कर्मचारीहरुको अभाव थियो । पहिला गाविस भएको कारणले गर्दा बजेट पनि थोरै आउने गरेको थियो । हाल यो समस्याको सामाधान भइसकेको छ । उपभोक्ता समितिमा पनि समस्या रहेको छ । कहिलेकाहीँ विकास निर्माणको काममा पनि समस्या देखापर्ने गरेको छ ।
केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ त ?
केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गरेकै छ । विशेष अनुदानको रुपमा हामी केन्द्र सरकारसँग पनि काम गरिरहेको छौं । केन्द्र सरकारबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आउने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर केन्द्र सरकारले पठाउने गरेको छ ।
तपाईंले गरेको विकास निर्माणका कार्यप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
म त एकदम सन्तुष्ट छु । विगतमा कुनै पनि संरचना थिएन । विगतकोभन्दा अहिले धेरै नै विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । निर्वाचनमा बोलेका कुराहरु पूरा गर्न सफल पनि भएका छौं । जनताको गुनासोलाई सम्वोधन गर्न सकिएको छ । म मात्र होइन विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएकाले यहाँको नागरिक पनि सन्तुष्ट भएको नै पाएको छु । सायद उहाँहरुको सन्तुष्टीले नै मलाई पनि सन्तुष्टि मिलेको हुनुपर्छ ।
तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ?
मूख्य योजना भनेकै जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई पुरा गर्ने हो । गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा विद्युत पुर्याउने लक्ष रहेको छ । खानेपानीको उचित व्यवस्था गर्ने, सबै वडामा स्वास्थ्य भवनको निर्माण गर्ने, आधारभुत अस्पतालको निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, पुर्वाधारको विकासतर्फ कम्मर कसेर अघि बढ्ने मैले योजना बनाएको छु ।
५२ उपसचिव र सहसचिवको सरुवा, कुन जिल्लाको सीडीओ कता ?
गभर्नर अधिकारीको क्यूआर कोड अभियानः अटो रिक्सादेखि तरकारी पसल र भेटीसम्म क्यूआर कोड
अबको ५ वर्षमा हाम्रो गाउँपालिका अन्य गाउँपालिकालाई लोन दिन सक्षम हुनेछ – अध्यक्ष खड्का